Factory Quilt - Mpanamboatra Quilt China, mpamatsy
Fampandehanana maodely fanaovana pirinty Aviation / Travel Quilt
Ny quilt manokana ho an'ny kabine kilasy voalohany amin'ny fiaramanidina fiaramanidina dia ampiasaina rehefa miala sasatra eny ambony fiaramanidina ireo mpandeha.
Tencel Airlines Sarona voalohany fonosana quilt
Ny maodelin-koditra volomboasary eny ambonin'ny endrika dia lamaody ary mahasarika ny masony, ary ny lamba fisaonana dia fotsy sy malefaka ary akaiky ny vatana. Ny lamba manontolo dia azo sasana mivantana hiarovana ny fahasalaman'ny ankohonana
Stitching Fanontana Aviation Quilt
Ny famolavolana kofehy marevaka sy lamba vita amin'ny loko miloko dia manome traikefa an-tsary hafa ny olona. Ny fanaovana pirinty sy ny fandokoana amin'ny namana dia manazava kokoa ny lokony sy tsy miovaova, tsy mora manjavona sy manjavona, manome fahatokisana ampy ny mpampiasa.
Blue Embossed Webbing Aviation Quilt
Ny fampiasana ny landihazo ho toy ny akora, ny fitsaboana ny fanasana rano dia mahatonga ny tampon'ny lamba ho malemilemy kokoa, miaraka amin'ny kentrona kely, somary milentika amin'ny fitaovana taloha, tsy mora simbaina, tsy manjavona ary tsy misy manisy vy.
Quilt pirinty fiaramanidina
Ny orinasa dia afaka mandray baiko isan-karazany ho an'ny lamba fiaramanidina. Tongasoa ny mpanjifa hanafatra na handanjalanjana amin'ny sary na santionany.
Pataloha fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy, Palitao fanatanjahan-tena, Akanjo fohy vita amin'ny ravina haingam-pandeha ho an'ny lehilahy, Lamba firakotra roa sosona, Fanodinana santionany sy famokarana, Akanjo fohy fanatanjahan-tena haingam-pandeha,